Inona no mandeha sy tsy mandeha amin'ny dokam-barotra an-tserasera + mari-pamantarana lehibe | Martech Zone
Inona no mandeha sy izay tsy amin'ny doka an-tserasera + mari-pamantarana lehibe
Alatsinainy Aprily 7, 2008 Alatsinainy Desambra 19, 2016 Douglas Karr
MarketingSherpa's Torolàlana momba ny doka an-tserasera sy zotram-pifandraisana an-tserasera 2008 dia teraka noho ny finoana fa diso hevitra ny doka amin'ny Internet amin'izao fotoana izao, ary vokatr'izany dia tsy ampiasaina firy. Tsy midika akory izany fa ny dokam-barotra efa misy dia tokony hampitombo ny fandaniana amin'ny Internet fotsiny. Fa kosa, izahay dia mieritreritra fa ny mpanao dokam-barotra izay afaka mahita fifandanjana eo amin'ny tanjona ara-toekarena, mahomby ary ny fanaovana dokam-barotra be atao, dia hahazo ROI tsara kokoa ho azy ireo ary traikefa tsara kokoa amin'ny Internet ho an'ny mpanjifa. Sombiny mihetsiketsika maro no tafiditra anaty fampielezan-kevitra an-tserasera, noho izany tsy asa mora izany.
Ny sakana voalohany, izay tsy maintsy resena, dia ny matematika any an-tsekoly taloha dia mifototra amin'ny fetran'ny media mahazatra, linear, analog, ary tsy maneho ny zava-misy amin'ny media tsy nomerika, nomerika. Noho io antony io, ny matematika amin'ny haino aman-jery nomerika dia mila mihaingo kokoa, ary ekena bebe kokoa amin'ireo matihanina amin'ny haino aman-jery. Iray amin'ireo fomba miharihary kokoa amin'ny fampidirana sophistication amin'ny fividianana haino aman-jery nomerika ny fijerena akaiky ny fahita matetika. Tsy avelan'ny haino aman-jery nentim-paharazana hifehezana ny fahita matetika amin'ny sehatra tsirairay fa ny nomerika kosa. Noho izany antony izany dia nahazo angona avy amin'ny InsightExpress izahay izay mampiseho ny fiatraikan'ny fahita matetika amin'ny fahombiazan'ny doka, nijery ny tahan'ny fiovam-po miangona isaky ny fahita matetika avy amin'ny Doubleclick izahay, ary avy eo nanazava ny fomba fampiharana politikam-pandrefesana matetika izay misy dikany ho an'ny paikadin'ny dokam-barotra tsirairay.
Ny famerana ny drafitra fampitam-baovao mahazatra sy ny matematika dia ny tsy fiheverana ny kalitao amin'ny haavon'ny mpanjifa tsirairay. Miaraka amin'ny teknikan'ny fividianana nentim-paharazana dia misy ny "fako" sasany izay sarotra raisina. Ireo mpanao dokambarotra dizitaly dia afaka ary tokony hametaka ny refy amin'ny kalitao rehefa manomana media. Izy io dia afaka manana endrika maro, manomboka amin'ny lasibatra fitondran-tena mandroso ka hatramin'ny manome tombana amin'ny vidin'ny fiovam-po. Mampiseho fomba iray hanomezana kalitao amin'ny fametrahana amin'ny alàlan'ny eyetracking, ary ny fahombiazan'ny media izahay amin'ny alàlan'ny fanadihadiana mahomby amin'ny haino aman-jery. Ny tiana hambara dia ny fikajiana ny fahombiazana mahomby fa tsy ny fanatrarana fotsiny dia tokony ho fanao amin'ny sehatra nomerika.
Tsy mieritreritra izahay fa misy bala majika hamoronana doka tonga lafatra, ary tena mamporisika ny olona hamorona sy hanandrana zava-baovao. Araka ny fikarohana nataontsika dia ireo mpanao dokam-barotra no manandrana zava-baovao ary manandrana tsy tapaka izay mahomby hatrany. Mamporisika mafy ny fikarohana sy ny fitsapana izahay ary mampiseho porofo amin'ny fanadihadianay fa ny fikarohana qualitative, izay misy fiantraikany amin'ny fahitana mankany amin'ny famoronana doka, dia mety hahomby kokoa amin'ny fomba fijery ROI noho ny fanatsarana ny fanarahana fizahana na ny fitsapana A / B.
Ary farany, ny analytics dia mila mihatsara kokoa amin'ny fampidirana ireo metatra maodely mba hahomby. Amin'ny alàlan'ny famolavolana tabilao marika izay mampiditra metrikan'ny marika namboarina avy amin'ny angona santionam-panadihadiana miaraka amin'ny fandrefesana hita, toy ny fiheverana sy tsindry, azo atao ny mahazo sary feno kokoa momba izay tena mitranga amin'ny fampielezan-kevitra amin'ny Internet. Be loatra ny angona ary tsy ampy ny fahitana ao.
Tsy manana ny valiny rehetra isika, fa manana be dia be kosa, ary raha tsy misy dia manantena izahay fa hanome adihevitra, hevitra vaovao ary fitsapana. manosika dokam-barotra an-tserasera manomboka amin'ny toerana tokony hisy azy io dia mety hisy dingana miadana, saingy irinay ny handray anjara.
Tags: 2008benchmarksmarketing sherpa
Mahazoa aingam-panahy fa aza manaraka ny raikipohy
ProBlogger: Mividiana kopian'ny Bokin'i Darren!
Noa David Simon
Apr 7, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
tsy hitranga izany. tsy misy doka amin'ny haino aman-jery sosialy mihoatra ny doka. Ny sisa rehetra dia SPAM. Ny filokana tsara indrindra dia ny fametrahana vokatra ao amin'ny youtubes
Apr 7, 2008 ao amin'ny 11: PM PM
Izaho dia ao amin'ny kaonferansa Ad Tech any Paris ary ny lohahevitra miverimberina eto dia misy zavatra telo:
1. Fahazoana kendrena - na dia tena zava-dehibe aza ny atiny sy ny kalitao, ny fahalalana ny fahazaran'ny mpamaky anao no tena zava-dehibe kokoa. Ny tranonkala tambajotra sosialy no safidy mazava ho azy satria mitahiry ny vaovao be momba ny mpampiasa azy ireo izy ireo. Na izany aza, rehefa mandeha ny fotoana ary miorina amin'ny tranokalan'ny mpamaky na tsia ny votoatin'ny votoaty tsara na maimaim-poana na premium ny atiny, ireo tranonkala ireo no toerana mety apetraka amin'ny doka an-tserasera. Porofon'izany ny fananganana ny tamba-jotra bilaogera Forbes 400.
2. Fandaniana doka an-tserasera - Michael Kleindl avy amin'ny Wunderloop dia nanonona fa ao anatin'ny herintaona avy amin'ny totalin'ny isan-jaton'ny fandaniana doka, na TV, radio, gazety sns, 10% no ao anaty Internet. Nihevitra izy manokana fa na dia ny 10% aza dia ambany loatra ary mihevitra fa ny UK dia ho akaiky ny 50% ao anatin'ny herintaona.
3. Rehefa mihabe ny TV nomerika dia mitombo ihany koa ny dokambarotra amin'ny Internet. Antony iray lehibe lehibe hafa koa ny fitomboan'ny hafainganana amin'ny Internet. Orinasa sasany (mila manamarina ny fanamarihako aho) dia mampanantena hafainganam-pandeha 100mb ao an-trano manokana ao anatin'ny herintaona. Mbola misy olona ve mijery TV tariby na terrestrial mifototra amin'ny tany intsony raha vao mitranga izany? Ho fifaninanana goavana izany.
Araka ny nasongadin'i Doug dia momba ny fanaovana tatitra sy ny fanadihadiana izany. Izany angamba no antony mahatonga ny tambajotra fanaovana dokambarotra mampiasa vola be amin'ny mpanjifa, teknolojia fanaovana tatitra.
Izaho manokana dia mino fa nisy fanombohana diso tamin'ny Internet. Mino aho fa miaina izany amin'ny finday isika izao. Na eo aza izany, na eo aza ny tsy fahitana fahitana amin'izao fotoana izao momba ny doka finday mahomby, ny Internet dia misy andian'olona iray manontolo izay nanam-potoana hianarana amin'ny hadisoana taloha ary farany hahalavorary.
Apr 8, 2008 amin'ny 8: 09 AM
Azonao atao ny misaotra an'i Tim avy amin'ny Marketing Sherpa noho ity lahatsoratra tsara ity - nanasa azy ireo aho hanao vahinin'ny vahiny ary nametraka lohahevitra miavaka izy ireo! Miavaka ny valinteninao.